पहिलो पटक बम्जनको आश्रममा प्रहरी र सीआईबीको छापा - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : शुक्रबार, पुष २०, २०७५१४:५७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौं । चर्चित डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीले तपस्वी रामबहादुर बम्जनको आश्रममा भएका कर्तुत बारे श्रृंखलाबद्ध रुपमा समाचार प्रकाशित गरे पछि सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बम्जन विरुद्ध नेपाल प्रहरीमा मुद्दा परे पछि प्रहरीले तपस्वीका रुपमा चर्चामा आएका बम्जनको आश्रममा छापा मारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले संयुक्त रुपमा आज बिहान बाडेगाउँस्थित आश्रममा छापा मारेको हो ।
‘आश्रममा छापा मारेका छौं, अहिले यत्ति भन्छौं ।’पब्लिक आवाज संग टोलीकै एक सदस्यले भने । बम्जनको आश्रममा खानतलासी गर्न जिल्ला अदालतले बिहीबार प्रहरीले अनुमति दिएको थियो ।
डिजिटल पत्रिका सेटोपाटीले प्रकाशित गरेका उक्त समाचारहरु
‘आश्रमभित्र खेतबारी थियो। खन्ने, बाली/तरकारी लगाउने काम गर्थ्यौं। घरको काम पनि गर्नुपर्थ्यो। भान्छाको काम सबै आनीहरूले नै गर्ने हो,’ सरिताले सम्झिइन्, ‘हामीले चेलाहरूका लागि पनि खाना पकाउनुपर्थ्यो।’
उनीहरूले ‘गुरू’ सँग आफूहरूलाई ज्ञान दिने कक्षा व्यवस्था गर्न माग नराखेका हैनन्। बमजन यसबारे कहिल्यै गम्भीर भएनन्। उनले आनीहरूलाई कहिलै पढाएनन्। प्रवचन पनि दिएनन्। उनी तपस्यामा लीन भएको पनि आनीहरूले कहिल्यै देखेनन्।
गुरूले कहिलेकाहीँ ‘सम्झाउने’ गरेको सरिताले बताइन्।
‘त्यहाँ गल्ती गर्ने आनीलाई सम्झाउने हो गुरूले। त्यो बेला उहाँलाई रिस उठ्यो भने पिटाइ भेटिन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
सरिताले एकपटकको घटना सम्झिइन्। दुई जना आनी मनमाया र पेम्बाले घर जान मन लागेको कुरा बमजनसमक्ष राखे। उनले प्रश्न गरे, ‘किन जाने? केही कारण नभई पठाउँदिनँ।’
‘कारण केही छैन गुरू,’ मनमायाले टाउको झुकाउँदै सुस्तरी भनिन्।
‘कारण भन्ने भए भन्, नभए मेरो नियम अर्कै छ,’ बमजनले धम्कीपूर्ण लवजमा भने।
‘बस्न मन छैन,’ मनमायाले भनिन्।
‘घरबार त्यागेर आनी बन्न आएपछि बुबाआमाको जस्तो माया पाइँदैन। त्यस्तो खोज्नु पनि हुन्न,’ बमजनको स्वर उचो हुँदै गयो।
मनमयाले भनिन्, ‘आश्रममा बस्न मन भएन।’
‘गुरूले मनमाया र पेम्बा आनीलाई पालैसँग पिट्नुभयो। आनीहरू ढलपल ढलपल भएर लडे,’ सरिताले भनिन्, ‘गुरूको हात हेर्दै बलियो थियो। मलाई सम्झिँदा अहिले पनि डर लाग्छ।’
‘हामी सबै आनीहरू गंगा आनीकै पछिपछि गयौं,’ सरिताले भनिन्, ‘गुरूले गंगालाई फेरि भने- घर किन नगएको? घर जा।’
गंगाले यत्ति उत्तर दिइन्, ‘म जान्नँ।’
बमजनले फेरि भने, ‘भागेर जा।’
‘त्यो दिन गुरूले गंगा आनीलाई धेरै जान्ने भइस् भने तेरो भाइ र बाबालाई मारिदिन्छु पनि भनेका थिए,’ सरिताले भनिन्।
आनीहरूले प्रतिवाद गरे, ‘गंगाको के गल्ती छ र जाने गुरू?’
गुरूले आँखा तर्दै भने, ‘तिमीहरू पहिले सबै पत्थरकोट जाओ। गंगा आश्रम छाडेर जा। ऊसँग मिल्नेहरु सबै जाओ। मलाई विश्वास गर्ने मात्रै बस।’
अर्की आनी जमुनाले अघि सरेर गुरूलाई सोधिन्, ‘गंगाको के गल्ती छ?’
‘मेरो शरीर पहिले जस्तो थियो, त्यस्तै बनाएर दे, अनि म यहाँबाट जान्छु,’ गंगाले भनेको सम्झिँदै सरिताले भनिन्।
‘म त सांसारिक जीवनमा नफर्किने, धर्म कमाउने, आनी बन्ने भनेर त्यहाँ गएको थिएँ। गुरूलाई भगवान मान्थेँ। गुरूप्रति धेरै नै बफादार थिएँ। त्यसैले, गंगा आनीले गुरूको विरोध गर्दा मलाई ननिको लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्।
‘गुरूनजिक अरू आनी आउँछन् भनेर गंगालाई डाहा भएको होला भन्ठान्थेँ नि म त,’ शर्मिलाले अगाडि थपिन्, ‘गुरू नै भगवान हो भन्ने विश्वास थियो, त्यसैले गंगालाई विश्वास गर्दिनथेँ।’
‘ओहो! हामीले त्यहाँ कति काम गर्यौं! छाकमा ३०/३५ जनालाई पकाउनुपर्थ्यो। बारीमा तरकारी रोप्ने, धान रोप्ने, अरू खेती लगाउने, उठाउने। दाउरा काट्ने। धर्मका लागि भनेर हामीले के के गरेनौं? जोडैले काम गरेम्,’ उनले भनिन्।
बमजन र गंगामायाबीच त्यो दिनको झगडाले शर्मिला ‘तीनछक’ परिन्। गंगाले ‘गुरू’ लाई भनेको सुनेर उनको दिमाग सनन्न भयो रे।
‘गंगा आनी त ठाडठाडै गुरूसँग बाझ्नुभो। तँ पहिले मेरो शरीर जस्तो थियो, त्यस्तै बना अनि म घर जान्छु भन्नुभयो,’ शर्मिलाले सम्झिइन्, ‘हो, त्यो बेला म पहिलोपटक झस्किएँ, के भनेको हो गंगा आनीले भनेर।’
‘म त्यो देखेर खुब डराएँ। सबै आनीहरू रोइरहेका थिए, चिच्याइरहेका थिए। जे भइरहेको थियो, मैले विश्वासै गर्न सकिरहेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्।
त्यसैबीच गंगाले चिच्याउँदै भनिन्, ‘यो भगवानको ठाउँ हैन। रण्डीखाना हो। बम्बैको कोठीभन्दा खत्तम ठाउँ हो।’
गंगाको कुराले शर्मिलाको मुटुमा हान्यो। ‘कति समयपछि ब्यूँझिएँजस्तै भएको थियो मलाई,’ शर्मिलाले भनिन्।
दिपशिखाले भनेको सम्झिँदै शर्मिलाले भनिन्, ‘गुरूले धेरै आनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको छ। तपाईंहरू पनि गुरूको अगाडि एक्लै नजानू। राति एक्लै नहिँड्नू।’
‘त्यो बेला म त्यहीँ थिएँ। गुरूको फोन आएपछि गुरूआमा अत्तालिँदै सिन्धुली हिँड्नुभयो,’ सिर्जनाले भनिन्।
दिपशिखाले फोन राखेर उनीहरूसँग भनेकी थिइन्, ‘गंगालाई बेस्सरी पिटेजस्तो छ।’
दिपशिखाको कुरा सुनेपछि विष्णु आनी ‘निलीकाली’ भइन्। ‘गुरूले गंगालाई मलाईजस्तै गर्यो होला भनेर विष्णु आनीले खुब चिन्ता गर्नुभयो। रूनु पनि भयो,’ सिर्जनाले भनिन्।
‘मलाई पहिले पहिले साह्रै दुर्व्यवहार गर्यो गुरूले। नराम्रो काम गर्थ्यो। पिट्थ्यो। सियोले घोच्दिन्थ्यो,’ विष्णुलाई उद्धृत गर्दै सिर्जनाले भनिन्, ‘पछि त बानी पर्‍यो।’
‘म पहिले कस्तो सिरियस थिएँ। खुब पढ्थेँ। ध्यान गर्थें। नपढ्ने, गफ गरेर बस्ने आनीहरू देखेर मलाई लाग्थ्यो- आनी भएर पनि किन यस्ता भएका होलान्?’ उनले भनिन्, ‘आनीहरू गीत गाउँथे, मलाई भने अचम्म लाग्थ्यो।’
दिदीले भनिन्, ‘म गाडी व्यवस्था गरेर पठाउँछु। आश्रममा बस्न नचाहने सबै आनी भाग्नू।’
‘मकैबारीबाट भाग्दा कसैको चप्पल गाडियो। कसैको खुट्टा भासियो। कसैको लुगा च्यात्तियो। कसैको मोबाइल छुट्यो,’ शर्मिलाले भनिन्, ‘अहिले त्यो सम्झिँदा कथाजस्तै लाग्छ।’
बमजनको आश्रमबाट भागेका तीन आनीको कथा अमित ढकाल र शोभा शर्मा
बम्जनको आश्रमबाट बेपत्ता भएका आनीहरू चुन्मो र डोल्मो।बम्जनको आश्रमबाट बेपत्ता भएका आनीहरू चुन्मो र डोल्मो।
उनले छोरीलाई बोलाएर सोधिन्, ‘कहाँबाट, को मान्छे लिएर आइस्?’
चेलाहरूले सोधे, ‘गुरू, कसरी?’
‘लिटिल बुद्ध’ भनिने बमजनले चेलाहरूलाई सम्झाए, ‘आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग गरेर बलि रोक्छु। पीर नगर्नू।’
उनले एकदिन बमजनलाई सोधिन्, ‘तपाईं तपस्वीजस्तो मान्छे, मेरी बहिनीसँग कोठामा किन बस्नुहुन्छ?’
बमजनले भने, ‘दिदी, म तपाईंको बहिनीलाई मन पराउँछु। हामीबीच प्रेम छ।’
‘हामीलाई त्यस्तो कुरा थाहा छैन। हाम्री बहिनी तपाईंसँग यसरी बसेको समाजले थाहा पायो भने इज्जत जान्छ,’ उनले जवाफ दिइन्।
‘तपाईं यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न दिदी,’ बमजन थोरै झोक्किए।
‘फोटा खनेर निकालेको र जलाएको देख्दा छक्क पर्‍यौं। रोक्दा पनि मानिनन्, रिसाइन्,’ रिताकी भाउजूले भनिन्।
‘मेरो भाइको सम्पत्ति खान आएको भनेर जेठाजुले पिट्यो, कान्छो भाइले छुट्यायो भन्थी,’ सुम्नीले सम्झिइन्।
त्यो बेला उनले रितालाई सोधेकी थिइन्, ‘तपस्वी र तेरो बिहे भएको हो?’
‘हैन,’ रिताले भनेकी थिइन्।
‘त्यसो भए किन ऊसँग बसेको, किन उसको दाजुलाई जेठाजु भनेको?’ सुम्नीले आफ्नी छोरीलाई सोधिन्।
‘छोरीले उत्तर नै दिइन,’ सुम्नीले हामीसँग भनिन्।
सुम्नीले त्यस बेला रितालाई ‘अब बमजनकहाँ नजा’ भनिन्।
‘त्यस्तो गर्छ भने किन जान्छस् भन्थेँ म,’ सुम्नीले भनिन्, ‘तर, चार-पाँच दिनमै बमजनको फोन आयो अनि गई।’
घरका मानिसले सोधे, ‘रिता खै?’
उनकी माइली भाउजूले बमजनलाई भनिन्, ‘हाम्रो चेली जस्तो गएको थियो त्यस्तै ल्याइदिनू।’
‘छोरी हो, झझल्को आइरहन्छ। आइहाल्छ कि भन्यो, सन्तोक गर्‍यो,’ रिताकी आमा सुम्नीले भनिन्, ‘मनमा जतिखेरै ऊ बसिरहन्छ! हेर्न मन लाग्दा फोटो पनि छैन, सबै जलाएर गयो। म बाँचुञ्जेल एकपटक आइहाल्छ कि!’
‘ऊ जहाँ बसे पनि हरेक साल मलाई भेट्न आउथ्यो,’ आमा सुकुमायाले भनिन्, ‘त्यो बेला चुन्मो र डोल्मो एक रात बसेर गए। त्यसपछि अर्को साल त आउँछ होला भन्यो आउँदैन। यत्रो वर्ष बितिगयो।’
‘यो केटी त गुरूको आश्रममा छैन,’ सञ्जयले ती व्यक्तिले भनेको सम्झिए, ‘उसले धेरै कुरै गर्न मानेन।’
सञ्जयले ती व्यक्तिको नाम सोधे। उसले आफ्नो नाम भन्न पनि मानेन। ‘तपाईंलाई नाम किन चाहियो’ भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्यो।
एक जनाले चुन्मोलाई कहिल्यै नदेखेको बताए। अर्कोले भने, ‘यो त अहिंसावादीको सिआइडी हो। नराम्रो मान्छे हो। धेरै पहिल्यै हाम्रोबाट गइसक्यो।’
‘मेरो बैनीले बमजनलाई त्यति धेरै मान्थ्यो। हामीलाई नै सम्झाउँथ्यो। बमजनकोमा जाउँ भनेर भाइलाई समेत फकाएको थियो। उनीहरू भने उल्टो सिआइडी भन्दो रैछ,’ चुन्मोकी ठूलीदिदी गंगामायाले भनिन्।
‘हामीले आश्रममै जान पैसा जोहो पनि गरेको हो। तर, परिवारको एक जना बेपत्ता छ, हाम्रो पनि ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ, नजाऔं भन्ने कुरा आयो। आँट्न सकेनौं,’ सञ्जयले भने।
‘रिसको झोंकमा फाल्दिन्छु, डढाइदिन्छु भन्ने सोच्छु। फेरि छोरी त्यहाँ गएको प्रमाण यही मात्र हो भनेर सम्हालेर राख्छु,’ सुकुमायाले भनिन्।
‘जिउँदो भए त आजसम्म आइहाल्थ्यो कि भन्छु। मनमा पीर परिरहन्छ। खाएको पनि जिउमा लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘फेरि उसको झझल्को आइरहन्छ। आइहाल्छ, बोलिहाल्छ जस्तो लाग्छ।’
‘हलखोरिया हुँदा नजिकै पर्थ्यो, उनीहरू आइरहन्थे,’ आमा सम्झनाले भनिन्, ‘दुवै जना तीनपटक आएका थिए।’
डोल्मोका आमाबुबाले त्यस बेला छोरीले भनेको सम्झिए, ‘मलाई भेट्ने भए तुरून्तै आउनू। भोलि नै आउनू। तर, अबदेखि यहाँ फोन नगर्नू। नराम्रो मान्छ।’
‘हामीले त बिर्सेजस्तो पो भएछ। असारमा सम्झ्यो अनि छोरी भेट्न हामी सिन्धुपाल्चोक पुग्यौं,’ डोल्मोकी आमाले भनिन्।
उनले भने, ‘यहाँबाट त निस्केर गयो।’
‘हामीलाई उनले भनेको कुरामा विश्वास भएन,’ डोल्मोका बुबाले भने।
‘उनीहरू त यहाँ छैन। पछि आउँछ होला नि,’ ती मानिसले भने।
‘कतै फेरि गुफामा बसेको छ कि भन्ने पर्‍यो,’ आमा सम्झनाले भनिन्।
‘हामीलाई त त्यो मानिसले यो आश्रम हैन भन्यो,’ डोल्मोकी आमाले भनिन्, ‘हामीले त पहिले यही नम्बरमा फोन गरेर कुरा गर्थ्यौं भन्दा पनि उसले यो आश्रमको फोन हैन भन्यो।’
‘पूजामा पनि भेटिएन। आफैं आउला कि भन्छु, आउँदैन। कसैले मारेर फाल्यो भन्छ, कसैले के भन्छ,’ सम्झनाले भनिन्।
उनले ‘हामीले केही गरेको छैन गुरू’ भन्दै बिन्ती गरिन्।
‘घोडा पनि मारिस्, सुगा पनि मारिस्’ भन्दै बमजनले डोल्मोलाई गाली गरे। उनले ‘भगवान कोठामा लगेर तिमीहरूले को-कोसँग यौनसम्पर्क राख्यौ’ भनेर सोधे। ‘कतिवटा भूतप्रेतको मन्त्र बोकेको छ’ भनेर सोधे।
‘बमजनले नराम्रो काम गर्दाको भिडियो डोल्मोले खिचेको रहेछ। त्यो भिडियो माग भनेर बमजनले मलाई भन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
डोल्मोका बुबा, आमा र भाइसँग कुरा सकेर हिँड्ने बेला हामीले ‘मकवानपुरबाट बमजनको आश्रममा गएका अरू कोही हराएको तपाईंहरूलाई थाहा छ?’ भनेर सोध्यौं।
डोल्मोका बुबा वीरबहादुरले जवाफ दिए, ‘छ नि, त्यहाँ तलको वाइवा आश्रम गएको, फर्किएको छैन।’
‘वाइवा परिवारको घर तपाईंलाई थाहा छ?’ हामीले सोध्यौं।
‘चैत १४ गते बुबाले फोन गरेर म सिन्धुपाल्चोक आश्रममा छु, १७ गते घर आइपुग्छु भन्नुभएको थियो,’ महेन्द्रले भने।
आश्रमका हर्ताकर्ताजस्ता देखिने एक व्यक्तिले उनलाई भने, ‘खै उहाँ त अस्ति नै निस्केर जानुभयो। झमझम पानी परेको थियो। कहाँ जानुभयो थाहा भएन।’
‘त्यहाँ सोध्दा कसैले थाहा छ भनेन,’ उनले हामीलाई भने।
‘कसैले कहीँ देखेँ भन्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले त केही भनेको थिएन, बूढो खै के भो, के भो।’
‘जति सोधे पनि मलाई त थाहा छैन मात्र भन्थ्यो। एकदिन मैले धम्क्याएपछि बुबाको फोटो पठाइदियो,’ फोटो देखाउँदै उनले भने, ‘यही हो। नभए त हामीसँग बुबाको फोटो पनि थिएन।’
हामी भोलिपल्ट त्यो फोटो लिएर फेरि ती चेलाकहाँ पुग्यौं। फोटो देखाएर सोध्यौं, ‘यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ?’
उनले भने, ‘मकवानपुरका वाइवा यिनै हुन्।’
पनौती नगरपालिकामा अविवाहीत महिलालाई मासिक १ हजार भत्ता !